Osy | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana ny fomba hananganana boasary ho an'ny tenanao manokana: torohevitra mahasoa
Tsy isalasalana, ny fahasalamana manan-danja indrindra amin'ny vokatra ateraky ny biby dia fahasalamana, ary azo antoka fa amin'ny alalan'ny fahatanterahan'ireo fepetra fototra fisamborana. Raha toa ny fanontaniana momba ny fikajiana ny osy, dia ilaina ny manamarika fa na inona na inona efitrano azonao, na trano na trano, na trano, na ondry, na tranokely iray manokana, ny tena zava-dehibe dia tsy miteraka aretina sy fahafatesana izany toerana izany.
Ny fomba hitazonana sy ny fomba hanomezana osy lahy
Ny biby goavam-be dia biby tsy manan-danja amin'ny fikojakojana sy ny sakafo, fa ny baiko dia tokony ho amin'ny zava-drehetra. Mba hahafahan'ny biby hahatsapa tanteraka ny mety ho herin'ny maotera, tokony ho mendrika ny osy ao amin'ny efitrano misy azy ireo. Tokony hanana sakafo voalanjalanja ihany koa izy ireo mba hikarakarana tsara ny sakafo mba hamotsorana ny vokatra avy amin'ny vokatra.
Ahoana no hanasarahana ny ondry sy osy amin'ny ranomandry
Ny olom-pirenena raha ny filazan'ny pneuzy dia tsy mahatsiaro fa io aretina mahatsiravina io, izay mendrika ny anarana mahatsikaiky hoe "fahafatesana mainty", dia resin'ny vaksinim-bahoaka tamin'ny faramparan'ny taon-jato farany. Fa ny mponina, indrindra fa any amin'ny toerana misy ny ondry nentim-paharazana sy ny fikarakarana osy, dia tsy azo eritreretina ny mieritreritra ny olona - ho azy ireo, ny ondry sy ny pox pox ary mandraka androany dia mampidi-doza lehibe ny orinasa biby fiompy.
Soso-kevitra sy fanandramana ho an'ny osy
Goat - iray amin'ireo faritra tena mahasoa indrindra amin'ny fambolena biby. Ny famokarana Goat dia ahitana hena, ronono, volon'ondry, ambany ary hoditra. Ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny osy dia ny fampifanatrehany be loatra, ka tsy hiteraka fahasahiranana be loatra ny fiompiana zohy ao an-trano. Fomba hisafidianana osy Ny safidy amin'ny osy iray dia tokony hanatona ny andraikitra rehetra.
Ketose amin'ny osy: famantarana ny aretina, fitsaboana
Ankehitriny dia lasa malaza amin'ny toeram-pambolena ny fiompiana osy. Ny votoatiny dia orinasa tena mahasoa noho ny toetra mahasoa ny rononon'osy, ny vidiny avo lenta raha oharina amin'ny ombivavy ary ny fikarakarana ireo biby ireo, fa indraindray dia misy olana mipoitra. Ny iray amin'ireo olana ireo dia ketosis.
Mampiasà ary mifantina milina milanja ho an'ny osy
Vao haingana, ny famokarana ronono ho an'ny tanana dia nanjavona teo amin'ny fototra, tsy tao amin'ny toeram-piompiana lehibe, fa tany amin'ny toeram-piompiana tsy miankina ihany koa. Izy io dia nosoloina fomba mahazatra kokoa ahazoana vokatra mahasoa ho an'ny biby - mampiasa milina milanja. Izany fomba izany dia azo ampiharina amin'ny ombivavy, fa koa amin'ny biby hafa, indrindra fa ny osy.
Ny aretin'ny gaza sy ny toetran'ny fitsaboana azy ireo
Goat dia biby malaza izay manome ronono ambony sy salama. Mendri-piderana izy, mifanaraka tsara amin'ny toe-javatra rehetra, mihinana ny sakafo rehetra, mahita sakafo mora ary miaraka amin'ny fikarakarana sy fahasalamana sahaza, dia tsy miteraka olana. Tsy dia marary ny osy, saingy mila mahafantatra ny fomba hametrahana ny zavatra tsy ataon'ny biby sy ny fomba tokony hitondrany azy.
Ohatrinona ny ronono manome osy isan'andro
Ny osilahy dia mitsangana mba hamokarana hena, ronono, hoditra ary hoditra. Ireo izay te hiditra amin'ny fiompiana osy dia liana voalohany amin'ny fanontaniana mikasika ny habetsahan'ny rononan'ny rononon-kanina mandritra ny vanim-potoana iray ary ny fambolena mitarika amin'ny endrik'izany. Andao hojerentsika miaraka izany. Amin'ny alàlan'ny zana-trondro manomboka manome ronono. Tahaka ny biby rehetra ao amin'ny kilasin'ny biby mampinono, ny osy dia manana ronono ao anatin'ny fotoana fiterahana, satria ny tanjona voalohany dia ny mamelona ny taranany.
Kaopy hoditra: inona no ilaina, inona no fihinana, ahoana no hikoriana
Ny sira goat dia ampiasaina matetika amin'ny sakafo sy ny fomba fitsaboana isan-karazany amin'ny fitsaboana nentim-paharazana nandritra ny fotoana lava be. Rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy, io fanafody io dia manampy amin'ny fiatrehana ny kohaka, aretina katarrhala, aretin'ny gastrointestinalina, olana eo amin'ny hoditra, sns. Inona ny fananana manana ny vokatra, ary ny fomba hanomanana hevi-pahagagana, no hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tsy nanolotra ronono intsony ny osy: ny antony sy ny fomba hanafoanana azy ireo
Matetika ny tompon-kisoa no mitaraina fa ny fihenan'ny ronono na ny ronono very tanteraka. Mba hahatakarana ny antony hampihenana ny ronono, dia ilaina ny mandinika ny fepetra iantsoana ny osy, ary koa ny zavatra sy ny fomba amaminana azy. Na ilaina ny hatahotra ny hiankinan'ny ronono ao anatin'ny andro iray dia tsy manome ny ronono mitovy foana ny osilahy.
Goat Mastitis: Ny antony sy ny fitsaboana ny aretina
Ny fananana osy ao amin'ny toeram-piompiana dia tena mahasoa, na dia manahirana aza. Ny biby dia mila fitandremana amim-pitandremana, satria ny toe-piainana mahantra dia miteraka ny fisian'ny aretin-tsoan'ny omby, noho izany dia mety hahavery ny tombom-barotra sy ny fahaverezan'ny biby fiompy. Ny iray amin'ireto aretina ireto dia ny mastitis.
Sakafo oka: inona no tokony hatao, indrindra ny fikarakarana ny ankizy
Ny fiotazana osy dia afaka manatsara tanteraka ny toeram-pambolinao amin'ny vokatra manan-danja: ronono, hena, volon'ondry sy hoditra. Mba hahatonga ny biby hahaleo tena sy salama, ny tantsaha dia mila mahafantatra ny famantarana ny maha-bevohoka sy ny biby fiompy. Momba ny fomba iantsoana ny osy amin'ny osilahy, ahoana no ahafantarana fa ho ela ny biby dia ho zanak'ondry, ahoana no hianarana momba ny mety ateraky ny fiterahana amin'ny fiterahana sy ny fahasamihafan'ny fikarakarana ireo biby izay hianaranao avy amin'ity lahatsoratra ity.
Kitapoingan-tsakafo: famantarana sy ny fomba hamantarana azy ireo
Rehefa mipoaka ny osy dia tena zava-dehibe ny dingam-pivoarana. Ny fanaovana ny zava-drehetra amin'ny fotoana sy ny fotoana dia tokony ho azonao atao ny mamaritra hoe oviana ilay osy no vonona amin'izany. Inona no atao hoe fihazana? Ny fihazana dia ny fahavononana hiarahana; Antsoina hoe estrus io dingana io. Samy hafa tanteraka ny biby.
Ohatrinona ny osy iray mila ila ny ririnina sy ny fomba hanomanana izany
Ny famokarana herinandro ho an'ny osy amin'ny ririnina dia asa sarotra sy maharitra, ny fiainany sy ny fahasalaman'ny biby fiompy mandritra ny volana maro dia miankina amin'ny fanapahan-kevitra marina sy ara-potoana. Tokony hiantomboka amin'ny faran'ny lohataona na amin'ny fahavaratra mialoha ny asa miaraka amin'ny ravina ary tsy avotsotra hatramin'ny fararano mba hisorohana olana sy fanakorontanana.
Ny fomba hamonoana sy hanapaka ny osy
Ny osy famokarana ao an-tokantrano dia mitaky ny famonoana sy ny famonoana azy ireo. Ny fikarakarana ny teknolojia marina amin'ny famonoana biby dia hamela ny hoditra sy ny felam-boninahitra amin'ny lafiny tsara, ary koa hanana fiantraikany tsara amin'ny tsiron'ny hena. Ahoana ny fomba hamonoana ny osilahy mahitsy ary mizara ny faty, andeha hojerentsika.
Tsy tonga any amin'ny fihazana ny Goat: fomba hanentanana ny fihazana
Ny antony fototra ho an'ny tantsaha manosika osy dia ny fahafahan'ny biby hamerina ny taranaka. Ary noho izany dia tokony ho fantatry ny tompony tsara ny fomba fitondran'ny vehivavy rehefa mihaza izy. Ary mazava ho azy, inona no tokony hatao raha tsy mitranga izany ary nahoana. Rahoviana no manomboka ny fihazana? Ny fahantrana amin'ny tovolahy kely dia manomboka 7-9 volana, saingy tolo-kevitra izy ireo rehefa mahatratra 1.5 taona ny vehivavy.
Ahoana ny famaritana ny fitondrana vohoka ao amin'ny osy iray ao an-trano
Maro ny mpamboly mikarakara osy tsy vitan'ny tanjona hahazoana ronono, fa koa amin'ny fambolena, noho izany, ny fanangonana ny lahy sy ny vavy ho an'ny endriky ny osy dia vita. Mba hiarovana ny fahasalaman'ny vehivavy ary ny fiantohana ny fisian'ny taranaka azo tsaboina dia mila mahafantatra ny fomba fijerena ny fitondrana vohoka amin'ny biby ianao, afaka mamonjy araka ny tokony ho izy ary manome ny fikarakarana ilaina amin'ny zazakely sy vao teraka.
Ahoana no iantsoanao osilahy?
Ny fahaterahan'ny zaza ao an-trano dia miteraka fihetseham-po maro, ary amin'ity tranga ity dia mitombo avy hatrany ny fanontaniana momba ny fisafidianana solonanarana ho an'ny zaza vao teraka. Ny osy tanora dia voamarika fa azo ampiofanina, manaiky ny tompony izy ireo ary manjary mifandray amin'izy ireo, noho izany dia tokony hiantehitra tanteraka ny fisafidianana anarana.
Ny ra ao amin'ny ronon'ny osy: ny antony sy ny vahaolana
Amin'ny ankapobeny dia osy no omena mba hahazoana ronono, satria mahasalama sy mahasalama kokoa noho ny ombivavy. Mazava ho azy, raha latsa-paka ao amin'ny ronono ny fahalotoana, dia mihena be ny kalitaony, ary mihena ny tombom-barotry ny orinasa. Iray amin'ny rongony matetika ny ronono. Fantaro ny anton'izany sy ny fomba hisorohana izany.
Ahoana ny fomba hanamboarana fatin-doha amin'ny tananao?
Ny fanatontosana ny osy dia miankina amin'ny kalitaon'ny sakafo. Ny iray amin'ireo dingana voalohany amin'ny fanatsarana ny trano ho azy ireo dia ny fitaovana famokarana sakafo. Inona avy ireo fepetra takian'ny tetikasa momba ny sakafo sy ny fomba fanaovana azy ireo, vakiana etsy ambany. Ny fepetra fototra ho an'ny mpamatsy ny karazana rehetra Ny fepetra voalazan'ny trondro dia tokony: ny fiarovana; mora ampiasaina - ny tompony dia tokony ho afaka ny tsy hiteraka amin'ny fotoana fohy; Ny fitaovana dia tokony hanana fitaovana tsotra, ary ny fiarovana ny sakafo amin'ny fandrotsahana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Osy